Haweeka Aqalka Sare oo doonaya iney beddelaan tacaddiyada ku saleysan jinsiga – Kalfadhi
Guddoomiye Kuxigeenka 1-aad ee Golaha Aqalka Sare, Abshir Axmed (Bukhaari), ayaa sheegay in ay wali Soomaaliya la dhibaatooneyso xadgudubyada ku saleysan jinsiga, ayna tahay in loo istaago cirib-tirka dhaqankaas. Waxa uu ka hadlay kulan looga hadlayey tacaddiyada ku saleysan jinsiga oo maanta ka dhacay Muqdisho, kaas oo loogu ololeynayey dhawrista xaqa dumar. Kulankaas waxaa soo agaasimay haweenka Xubnaha ka ah Golaha Aqalka Sare.
“Kaliya ma ahan inaan is xasuusinno tacaddiyada ka jira dalka, balse waxaa muhiim ah in aan u isaagno sidii wax looga qaban lahaa arrimahan, maxaa yeelay dalkeenu waxa uu kamid yahay meelaha weli dunidu u aragto in ay ka jiraan taciyada ka dhanka ah aadanaha” ayuu yiri Guddoomiye Kuxigeenka 1-aad ee Aqalka Sare, Abshir Bukhaari.
Kulanka waxaa si adag looga dooday dhibaatooyinka ku dhacaqaab ku saleysan jinsi ee ka dhanka ah gabdhaha. Dumarka kulanka joogay, ooqaarkood madax u ah ama ka socday ururo u dooda xaqa dumarka iyo kan bini’aadamka,ayaa soo bandhigay farsamooyin ay u arkaan in dhibaatada jinsiga lagu dhameynkaro.
Xoghayaha Xubnaha Haweenka AqalkaSare, Samsam Ibraahim Maxamuud, ayaa sheegtay iney dumarkooda ku jira AqalkaSare wadaan dadaalo ay ku doonayaan iney ku bedelaan dhaqanka ku saleysantakoorka jinsiga.“Haweenkeenna ku jira Aqalka Sare waxaan xooggasaareynaa sidii aan uga soo horjeysan lahayn taciyada ka dhanka ah aadanaha eeka jira dalka, inaga oo xooga saari doonnameelaha ay ku badan yihiin” ayey tiri Sanatar Zamsam oo soo xirtay kulanka.
Xildhibaanno ku tilmaamay micna darro sababta baaqashada Kulamada Golaha Shacabka